Idlalwa kanjani i-Blackjack - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Blackjack » Idlalwa kanjani i-Blackjack
Yimiphi Imithetho Eyisisekelo Yomdlalo Okufanele Uyikhumbule?
Ukuhluka kwe-Blackjack Okufanele Ukwazi
Ukuziphatha etafuleni le-Blackjack
Uma kukhulunywa ngezingqinamba ezinhle kakhulu zokuwina ekhasino, umdlalo we-blackjack uthathwa njengomunye omuhle kakhulu. Nge-Gameplay yayo elula ne ‘ indlu ephathekayo ‘ngamaphesenti angu-1 kumakhasino amaningi, umdlalo we-blackjack uhlale uheha abadlali bezitayela ezahlukene zokudlala nokukholisa.
Kepha lesi akusona nje isizathu esenza lo mdlalo wekhadi uthandwe phakathi kwabathandi abafuna ukushaya ikhasino. Ukutholakala kwamasu wokudala nokulula ukulandela njengokubala kwamakhadi kuvumela abadlali ukuthi basebenzise umdlalo futhi bashaye indlu.
Ngenkathi kubonakala sengathi ukuwina umdlalo we-blackjack kulula okungenani ephepheni, umuntu kufanele akhumbule ukuthi impumelelo yangempela etafuleni lekhasino isadinga ukubekezela, ukuphikelela kanye nesimo sengqondo esifanele ngomdlalo. Kuyinto edingekayo ukuqonda ngokuphelele igeyimu nemithetho yomdlalo.
Uma ufuna ukuqonda ngokuphelele umdlalo futhi ufuna imiphumela, khona-ke umhlahlandlela olandelayo ungaba usizo.
Emdlalweni we-blackjack, abadlali bahlose ukushaya inani lesandla noma abasondele ku-21. Ukwenza lokhu kwenzeke, abadlali bazodinga ukudala inhlanganisela efanele yamakhadi. Kulo mdlalo wetafula, ukuhlelwa okuvamile ukusebenzisa okungenani ipaki elilodwa elijwayelekile lamakhadi angama-52, futhi ikhadi ngalinye liza nenani elinikeziwe.
Amakhadi kusuka ku-2 kuye ku-10 azogcina inani lawo lobuso. Amakhosi, amaQueens, namaJacks bazothatha inani lika-’10 ‘, kanti i-Aces yedokodo izothola inani lika-‘1’ noma u-’11 ‘. Kulezi zinhlanganisela eziningi ezingenziwa kulo mdlalo, isandla esihle kunazo zonke amakhadi amabili u-’21 ‘noma i-blackjack.
Kulomdlalo, umdlali ozothola i-blackjack uzokujabulela ukukhokhelwa okungu-3-2. Lokhu kusho ukuthi uma umdlali ebheja u- $ 6 kulo mdlalo bese ewina, uzogoduka ne- $ 9. Manje, uma umthengisi wekhasino futhi eqhosha ngamakhadi amabili u-’21 ‘bese ephusha noma ebopha, umdlali uzobuyiselwa imali yakhe. Kepha uma umthengisi wekhasino edonsa ku-’21 ‘enamakhadi angaphezu kuka-3 esandleni, khona-ke i-blackjack yomdlali ibhekwa njengengcono. Ngakho umdlali uzokujabulela ukukhokhelwa okungu-3-2.
Ngokwesiko, lo mdlalo udlalwa etafuleni elimise okwe-arc, futhi itafula ngalinye lingabamba abadlali abangafika kwabayisikhombisa. Uma ubheka ukwakheka nokuhlelwa kwetafula le-blackjack, uzobona ukuthi ekhoneni letafula kukhona uqwembe olunemininingwane ebangeni elamukelekayo lokubheja. Ithebula lizofaka nemininingwane noma imithetho embalwa engasiza abadlali ukudlala lo mdlalo.
Kusetshenziswa isithombe esiboniswe ngenhla, kukhombisa iqiniso lokuthi umthengisi kufanele adwebe ku-’16 ‘futhi ame ku-’17’, noma inkokhelo ingu-2 kuye ku-1. Ngamafuphi, abadlali kumele bayazi imithetho ekhonjiswa etafuleni ngaphambi kokuzama ukudlala ngemali yangempela.
Emdlalweni wendabuko we-blackjack, umthengisi wekhasino uzokwazi ukufinyelela emgodini wokudlala amakhadi amane kuya kwayisishiyagalombili. Ngemuva nje kokuxubana kwamakhadi, la makhadi okudlala abese efakwa esicathulweni lapho umthengisi abelwe khona ezothatha ikhadi elilodwa ngasikhathi.
Ngaphambi kokuqala komdlalo, abadlali kulindeleke ukuthi babeke ukubheja kwabo etafuleni ngokufaka amachips esigcawini sokubheja. Ngemuva kokuthi bonke abadlali babeke ukubheja kwabo etafuleni, abadlali nomthengisi banikezwa amakhadi amabili. Lapho kudlalwa umdlalo wezicathulo, amakhadi abhekane nabo bonke abadlali anikezwa ubuso nobuso, futhi abadlali abavunyelwe ukuthinta amakhadi.
Kepha uma umuntu edlala i-blackjack eyodwa noma ephindwe kabili esetshenzisiwe esandleni, amakhadi anikezwa abheke phansi, futhi abadlali bavunyelwe ukuthinta noma ukuthatha amakhadi. Kuzo zombili izimo, abadlali bangathembela ekhadini elilodwa elibekwe ubuso nobuso ukuze abanye abadlali bakwazi ukulibheka.
Ngemuva kwakho konke, amakhadi abelwe; abadlali bese benikezwa ithuba lokuthi bazodlala kanjani izandla ngokuya ngemithetho ejwayelekile yomdlalo. Ngokuya ngemithetho ejwayelekile yomdlalo, umthengisi kulindeleke ukuthi adwebe amakhadi angeziwe ngesamba esingu-16 noma ngaphansi, futhi kulindeleke ukuthi ame uma inani lesandla okungenani li-17.
Amanye amakhasino angaba nemithetho ethize kulokhu, ngakho-ke kungcono uqinisekise imithetho ngaphambi kokuzama ukuthola imali yangempela. Nakhu ukubheka ngokushesha ezinye zezinqumo umthengisi noma abadlali abangazenza ngesikhathi somdlalo wangempela we-blackjack.
Hit. Le inketho yabadlali abaningi abafuna ukuthuthukisa amathuba abo okuthola u-’21 ‘noma asondele kulokho. Umdlali okhetha le nketho uzothatha ikhadi ukukhulisa inani lesandla. Uma ngemuva kokudwetshwa kwekhadi inani lidlula u-’21 ‘, isidlali sigibela amabhasi bese silahlekelwa ukubheja.
Yima . Uma uthatha isinqumo sokuma, unamathela kunani lesandla olikhile.
Phansi Phansi . Kule nketho, uzokuphinda kabili ukubheja bese uthola ikhadi elilodwa ngaphezulu emphemeni. Abanye opharetha bekhasino bazokhawulela le nketho, ikakhulukazi kumakhadi ane-’10 ‘noma’ 11 ‘esewonke. Ukubheja okwengeziwe bese kufakwa ebhokisini eliseduze nokubheja kwangempela.
Hlukanisa. Lokhu kuyindlela enikezwa umdlali uma amakhadi amabili okuqala esandla ehlelweni elifanayo. Isibonelo, uphathwa ngama-7s amabili; ungabeka ukubheja kwesibili okulingana nokwokuqala ebhokisini lokubheja. Umthengisi wekhasino uzobe esehlukanisa noma ‘ahlukanise’ amakhadi, bese enikeza ikhadi lesibili kwelokuqala ‘7’.
Umshuwalense . Umshwalense ungathathwa uma ikhadi elibhekene nomthengisi liyi-Ace. Lokhu ukubheja ukuthi umthengisi wekhasino uphethe ikhadi elingu-10 elingaqedela i-blackjack. Le nketho izokhokha u-2: 1, okusho ukuthi umdlali uzothola ama- $ 2 ngakho konke ukubheja kwe- $ 1 okwenziwe.
Ngenkathi kunemithetho ejwayelekile yokudlala i-blackjack, khumbula ukuthi abanye opharetha bekhasino bangaphinda baguqule noma bashintshe imithetho. Nakhu okunye kokuhluka komdlalo okuthandwayo abadlali abangahlangabezana nakho ku-inthanethi.
Phinda kabili ngemuva kokuhlukaniswa kuvunyelwe. Lokhu ukuhluka okukodwa okuhle emithethweni engaklomelisa abadlali njengoba kunciphisa onqenqemeni bendlu ngokwesilinganiso samaphesenti ayi-0.13.
Ukuhlukaniswa kabusha kwe-Aces kuvunyelwe. Kumakhasino amaningi, umdlali onquma ukuhlukanisa i-Aces uzothola ikhadi elilodwa le-Ace ngayinye. Futhi uma umdlali ethola enye i-Ace, abanye opharetha bazovumela ukuthi umbhangqwana olandelayo uhlukaniswe. Futhi, lokhu kwehluka kwemithetho kuzosiza nabadlali njengoba umkhawulo wendlu unqunywa ngamaphesenti ayi-0.03.
Ukuzinikela Kwakuqala. Uma ikhadi elibhekene nomthengisi wekhasino liyi-Ace, angabheka elinye ikhadi uma kungu-10 ongakha i-blackjack ngaphambi kokuqhubeka nokudlala. Manje, uma umdlali evunyelwe ukunikela ngesigamu sokubheja kwasekuqaleni esikhundleni sokudlala isandla sonke ngaphambi kokuba umthengisi wekhasino ahlole ikhadi, leso senzo sibizwa ngokuthi ukuzinikela kusenesikhathi. Uma kwenziwe kahle, ukuzinikela kusenesikhathi kungehlisa onqenqemeni bendlu ngamaphesenti angama-0.624.
Ukunikela Late. Lokhu ukwehluka kokuzinikela kwasekuqaleni futhi kulokhu; umdlali usavunyelwe ukudela uhhafu wokubheja noma ngabe umthengisi wekhasino eselihlolile elinye ikhadi.
Ngaphandle kwemithetho eyisisekelo elawula i-blackjack, umdlalo ubuye ubize nenhlonipho lapho udlala. Lapho nje uhlala etafuleni le-blackjack, kufanele ulinde umthengisi ukuthi aqedele isandla ngaphambi kokucindezela ukubheja kwakho kumthengisi wekhasino bese uthi ‘Shintsha Ngiyacela’.
Ezimweni eziningi, kufanele usebenzise amathokheni kuphela lapho ubeka ukubheja ngaphandle kokuthi ikhasino icacisile ukuthi ungabeka futhi imali etafuleni. Lapho ukubheja sekuqediwe, gcina izandla zakho zingaphandle kwamashipsi wokudlala kuze kube yilapho isandla sesiqediwe.
Kunezikhathi lapho ama-chip atholakala emahlelweni ahlukahlukene. Indlela efanele yokuhlela lokhu ukuwafaka ngehlelo elincane kakhulu ngaphezulu.
Uma udlala kumakhadi anezitezi eziningi, izinqumo zokudlala zingadluliselwa ngamasignali ezandla. Uma udlala kumdlalo owodwa noma wesibili we-blackjack lapho amakhadi abhekiswa khona ubheke phansi, ungakhetha amakhadi usebenzisa isandla esisodwa bese uklwebha itafula ngekhadi uma ufuna ‘Hit’.
Kepha uma ufuna ‘Ukuma’, mane ulayishe ikhadi. Ungawaguqula amakhadi abheke phezulu lapho ‘U-Bust’ noma uma ufuna ‘Ukwehlukanisa’, yithi unama-7s amabili. Ekupheleni kwesidlali, kufanele uvumele umthengisi ukuthi avule wonke amakhadi atholakalayo ngaphansi kwama-chips.
Uma usaqala kulo mdlalo, kungcono ukuthi ugweme isihlalo sokugcina etafuleni, ngakwesobunxele somdlali. Ngokwenkulumo yokudlala, ibizwa ngokuthi ‘isisekelo sesithathu’, futhi lo ngumdlali owenzelwe ukudlala okokugcina.
Kwesinye isikhathi, lo mdlali uzothatha ukushisa kwabanye abadlali ngokuthatha ikhadi lomthengisi lomthengisi esikhundleni sokuma. Uma ungakwazi ukuphatha ukushisa noma ingcindezi, kungcono uhlale kwenye indawo.
IBlackjack ngumdlalo wetafula odumile futhi waziwa ngomphetho wendlu ongalawuleka ongamaphesenti ama-1
Kulomdlalo, abadlali baphathwa ngamakhadi amabili ngenhloso yokuthola inani lesandla elingu-’21 ‘noma eliseduze kwalo
Umdlali angakwazi ‘ukuma’ uma anelisekile ngenani lesandla, bese eya ku-‘Hit ‘uma efisa ukuthuthukisa inani lesandla sakhe ngokudweba elinye ikhadi
Abadlali futhi bangaDlala kabili, bahlukanise noma babheje kwi-Insurance
Njengeminye imidlalo yetafula, abadlali kulindeleke ukuthi baziphathe ngokufanele futhi badlale ngenhlonipho